Taliyaha booliska Xijaar oo magacaabay taliyeyaal cusub | Somsoon
Home WARAR Taliyaha booliska Xijaar oo magacaabay taliyeyaal cusub
Taliyaha booliska Xijaar oo magacaabay taliyeyaal cusub
Taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Jenaraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa soo saaray wareegto uu xilka uga qaaday qaar kamid ah taliyeyaasha qeybaha booliuska ee gobolka Banaadir. Isagoo magacaabay kuwa cusub.
Wareegtadan ayaa xilkii looga qaaday Taliyaha saldhigga ciidamada booliiska degmada Shibis ee gobolka Banaadir, waxaana xilkaas loo magacaabay, Cabdicasiis Axmed Baashane oo horay u soo noqday Taliyaha saldhigga degmada Cabdicasiis.
Cabdicasiis Baashane ayaa xilkaas laga qaaday markii uu dhacay weerarkii is-miidaaminta ahaa ee lagu qaaday hotela Elite oo ku yaalla xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay fuliyeen Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa wareegtadan xilkii looga qaaday taliyaha ciidamada Booliiska ee qeybta Bari, waxaana loo magacaabay Gaashaanle Mahad Korow.
Mahad Korow ayaa laga soo bedalay qeybta Waliyow Cadde ee magaalada Muqdisho. Waxaana la faray taliyeyaasha cusub inay gutaan waajibaadka shaqo ee loo igmaday.
Xilka qaadista iyo magacaabistan taliyeyaashan ayaa ku soo aadeysa, iyadoo xalay taliyaha booliiska Soomaaliya Jeneraal Xijaar uu kormeer ku tegay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo baraha Control ee laga sugo ammaaanka caasimadda.
Article horeDaahir Geelle oo afduubka C/laahi kulmiye ku macneeyay ‘suurad xumeyn dowladnimo’
Article socoda Gabadhii shalay laga afduubtay Muqdisho oo maanta lagu qabtay Gurceel